Sida Loo Codsado LLC: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato - Circle Wealth
Bogga ugu weyn Sida Loo Codsado LLC: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Isha sawirka: deposits.com
Arrin caadi ah oo ka mid ah milkiilayaasha ganacsiga waa sida loo xareeyo LLC. Codsashada shirkad xaddidan, oo ah foom ganacsi oo bixiya faa'iidooyin sida canshuur dhaafka iyo mas'uuliyadda xaddidan, waa nidaam kharash-ool ah oo fudud.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee LLC-yada ayaa ah in mulkiilayaasha ama maamulayaasha aan looga baahnayn inay isticmaalaan hantidooda si ay isaga bixiyaan deymaha LLC. Maalgelintooda gaarka ah ee shirkadda, maareeyayaasha ayaa kaliya lagula xisaabtamayo deynta LLC.
Sababtoo ah amniga ay bixiyaan iyo ku habboonaanta lagu samayn karo, milkiilayaasha ganacsiyada yaryar ee Maraykanka ayaa ka fikiraya aasaaska shirkado xaddidan.
Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah shirkadaha xaddidan ee xaddidan ayaa sahlan in la sameeyo macnaheedu maaha inay ka fudud yihiin maamulida dhismayaasha kale ee ganacsiga.
Marka la go'aaminayo in lagu daro shirkad mas'uuliyad xaddidan leh, waxaa jira waxyaabo badan oo la tixgeliyo. Haddii aad u baahan tahay dhaqaale, tusaale ahaan, maalgashadayaal badan ayaa door bida in ay la shaqeeyaan shirkad halkii ay ka ahaan lahaayeen shirkad xaddidan.
Intaa waxaa dheer, sharciyada xukuma abuurista LLC waxay ku kala duwan yihiin gobolka. Natiijo ahaan, baro naftaada shuruudaha gobolka ay shirkadu ka shaqayn doonto.
Marka la samaynayo LLC waa sahlan tahay, waxaa jira dhowr tillaabo oo ay tahay inaad sameyso si aad u hubiso in shirkaddaada si sax ah loo sameeyay.
Maqaalkani wuxuu si cad u sheegayaa tillaabooyinka saxda ah ee la qaado iyo habraacyada ku saabsan sida loo codsado LLC 2021.
Waa maxay Shirkadda Masuuliyadda Xaddidan (LLC)
Shirkadda daynta xaddidan (LLC) waa foom ganacsi oo gudaha Mareykanka ah oo isku dara ilaalinta mas'uuliyadda shakhsi ahaaneed ee shirkad iyo waxtarka canshuuraha ee shirkad gaar ah ama iskaashi.
Baadhid: Sida Loo Codsado Baasaboor Online | Talaabooyinka Shaqeeya
LLC ma u fiican tahay ganacsiga yaryar?
Tallaabada xigta ee kobcinta ganacsigaaga iyo ilaalinta hantidaada waa inaad sameysid LLC.
Markaad dhab ka tahay kobcinta ganacsigaaga oo aad faa'iido samaynayso, waa inaad ku darto LLC.
Waxaad ku samayn kartaa kuwa soo socda LLC ganacsigaaga:
Ilaali lacagtaada, baabuurkaaga, iyo gurigaaga.
Kor u qaad dareenkaaga deganaanshaha.
Oggolow faa'iido badan adoo ilaalinaya sirtaada
U ogolow koritaan degdeg ah.
Kor u qaad kalsoonidaada
Arag sidoo kale: Sida Loo Codsado Kaarka Lambarka Bulshada ee Cusub
Ilaalinta Mas'uuliyadda Qofka
Waxaad ilaalinaysaa mas'uuliyadda shakhsiga ah adiga oo samaynaya shirkad dayn xaddidan (LLC).
Tani waxay ka dhigan tahay in haddii shirkaddaada lagu dacweeyo ama ay ku guuldareysato deyn, hantidaada gaarka ah (baabuurka, guriga, xisaabta bangiga) waa la ilaalinayaa.
Akhri Sidoo kale: Sida Loo Codsado Amaah Ganacsi
Shirkadaha daynta xaddidan (LLCs) waxay ku habboon karaan qaab-dhismeedkooda cashuurta.
Tani waxay awood u siinaysaa ganacsiyada inay shaqaalaysiiyaan qorshaha canshuurta ugu waxtarka badan duruufahooda gaarka ah.
Hubi Sidoo Kale: Sida loo helo shatiga madadaalada 2022 | Hagaha Buuxa
Koboca suurtagalka ah
Sababtoo ah waxay bixiyaan ilaalinta mas'uuliyadda shakhsi ahaaneed iyo faa'iidooyinka canshuurta, LLCs waxay kordhin karaan faa'iidada iyo khatarta.
Kalsoonida Macaamilka iyo Kalsoonida
Guud ahaan, bangiyada iyo macaamiishu waxay ku kalsoon yihiin LLC-yada wax ka badan qabanqaabada ganacsi ee aan rasmiga ahayn sida lahaanshaha gaarka ah.
Tani waxay dhaawici kartaa awoodda ay shirkaddu u leedahay inay amaahdo lacag iyo suuqgeynteeda.
Waa maxay Celceliska Qiimaha lagu dhisayo LLC?
Khidmadda xaraynta gobolka, oo ku kala duwan $40 ilaa $500 iyadoo ku xidhan gobolkaaga, waa qaybta ugu qaalisan ee lagu daro LLC.
Waxaan faahfaahin ka bixinaa khidmadaha samaynta LLC mid kasta oo ka mid ah 50-ka gobol ee ku jira Qiimahayaga si loo Sameeyo hagaha LLC.
Waxaad u samayn kartaa LLC-gaaga mid ka mid ah laba siyaabood:
Deji LLC-kaaga adiga oo kaashanaya bixiye samaynta LLC oo xirfad leh (lacag yar oo dheeri ah).
Waxa kale oo aad adigu samayn kartaa adiga oo isticmaalaya casharkayaga Foomka LLC ee bilaashka ah.
Miyaan u baahanahay LLC ganacsigeyga yar?
Marka la go'aaminayo in la sameeyo LLC, milkiilayaasha ganacsiyada yaryar waa inay baaraan arrimaha soo socda:
Kalsoonida macaamiisha iyo kalsoonida
Masuuliyadda xaddidan iyo Khatarta
Mas'uuliyadda alaabta, waxyeellada shakhsi ahaaneed, iyo/ama ku xad-gudubka calaamadda ganacsiga ayaa dhammaantood ah welwelka suurtagalka ah ee shirkadaha yaryar.
Meherad kasta oo khatar ku ah milkiilaha waa in si sharci ah looga soocaa.
Ilaalinta mas'uuliyadda xaddidan waa ereyga kala-soociddan.
Haddii ganacsi lagu dacweeyo ama ku guuldareysto deyn, mas'uuliyadda xaddidan waxay ilaalinaysaa hantida gaarka ah ee milkiilaha ganacsiga (baabuur, guri, iyo kayd).
Canshuuraha Faa'iidada iyo LLC-yada
Beddelka canshuurta ee kala duwan ee LLC ay bixiso waxay caawin kartaa ganacsi yar oo soo saara faa'iido joogto ah.
Milkiilayaasha LLC waxay leeyihiin ikhtiyaarka ah inay bixiyaan cashuuraha si ay u noqdaan shirkad ama shirkad S (S corp).
Heerka canshuurta LLC ee caadiga ah waa mid aad u fiican milkiilayaasha ganacsiga ee raba inay dib u maalgashadaan faa'iidada shirkadda, halka heerka canshuurta shirkadda S (S corp) ay ugu fiican tahay shirkadaha doonaya inay u qaybiyaan inta badan faa'iidada saamileyda.
Si aad u hesho caawimo lagu go'aaminayo in LLC kaaga lagu canshuuro LLC ahaan ama shirkad ahaan S, eeg hagaha shirkadaha LLC vs S ee hoose.
Shirkadda vs. Shirkadda Masuuliyadda Xaddidan
Sameynta iyo dayactirka LLC ama shirkad waxay bixisaa ilaalin xaddidan. Si kastaba ha ahaatee, qaabkee ganacsi ayaa ugu fiican gaadhigaaga cuntada?
Kaliya mulkiilayaasha ganacsiga ee u baahan inay ku tiirsanaadaan maalgashadayaasha dibadda waa inay sameeyaan shirkad. Sababtuna waa habka ganacsiga loo canshuuro. Haddii maalgashadayaasha dibadda ay muhiim yihiin, shirkadda cuntada xamuulka qaada waxay ka faa'iidaysan kartaa inay noqoto shirkad.
LLC waa doorasho wanaagsan shirkad kasta oo yar oo aan u baahnayn maalgashadayaasha dibadda oo doonaya inay lacag ku badbaadiyaan canshuurta.
Kalsoonida macaamiisha iyo iibka ku celcelinta ayaa lama huraan u ah shirkadaha yaryar. Bilawga iyo socodsiinta ganacsiga, kalsoonida waa muhiim.
Si fudud marka lagu daro LLC, ganacsiyadu waxay helayaan heerka kalsoonida macaamiisha iyo sharcinimada.
Sideen u Aasasaa LLC?
Habka loogu darayo LLC waa mid toos ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhowr tillaabo oo milkiilaha ganacsigu ay tahay inuu sameeyo si loo hubiyo in LLC si sax ah loo dhisay.
Habka sameynta shirkad mas'uuliyad xaddidan (LLC) waa mid toos ah. Gobolo badan ayaa u oggolaanaya ganacsatada inay sameeyaan shirkad xaddidan (LLC) onlayn.
Hab dhaqameed, sida ku xeraynta foomka boostada ama shakhsi ahaan, sidoo kale waxay heli karaan milkiilayaasha ganacsiga. Kharashka xaraynta ayaa laga yaabaa inuu u dhexeeyo meel kasta laga bilaabo $100 ilaa $800.
Tallaabada ugu horreysa waa in la doorto magaca shirkadda. Aad bay muhiim u tahay inaad ku bixiso dadaal aad u badan si aad u fikirto magacyada LLC ee suurtagalka ah.
Muhiimadda ay u leedahay in aad magac adag u soo qaadato shirkaddaada waxa ay dhaafsiisan tahay suuq-geynta iyo summaynta. Markaad magac u dooranayso LLC kaaga cusub, waxaa jira walaac sharci ah oo maskaxda lagu hayo.
Magaca LLC ee aad soo jeedisay waa inuu ku jiraa nooc ka mid ah calaamad muujinaysa in ururkaagu yahay shirkad masuuliyad xaddidan leh. Natiijo ahaan, waxaad u baahan doontaa inaad ku darto magacyo sida "Shirkadda Mas'uuliyadda Xaddidan" ama "LLC" magacaaga la soo jeediyay.
Sidoo kale ma isticmaali kartid ereyada la mamnuucay ee magaca LLC-gaaga ilaa aad hesho oggolaansho. Waa kuwan dhawr kelmadood oo inta badan la xaddiday:
Bangiyada \_ Caymiska \_ Xeer Ilaaliyaha
Fiiri liiska gobolkaaga ee weedhaha la xaddiday iyo kuwa la mamnuucay si aad u hubiso inaadan dhibaato ku qabin ka dib markaad gudbiso codsigaaga.
Waa inaad sidoo kale sameyso cilmi baaris si aad u hubiso in magaca ganacsi ee la soo jeediyay uusan ku xadgudbin wax calaamado ganacsi ah.
Qaadashada talaabadan hadda waxay kaa badbaadin doontaa waqti badan iyo ka sii darid hadhow. Si aad u hubiso jebinta summada-ganacsiga ee iman kara, isticmaal Nidaamka Raadinta Elektrooniga ah ee Ganacsiga.
TESS waa xog ururin ka kooban dhammaan calaamadaha ganacsiga ee diiwaangashan iyo sidoo kale codsiyada summada ganacsiga ee sugaya. Xafiiska Patent and Trademark ee Maraykanka ayaa ilaalinaya xogtan.
Inkastoo baaritaanku aanu ahayn mid khasab ah, haddana waa go'aan caqli-gal ah. Waxaad ku ogaan kartaa haddii calaamad ganacsi la codsatay ama la diiwaan galiyay adoo samaynaya baaritaan. Raadi magacyo aad ugu eg magaca LLC ee aad tixgelinayso.
Labo jeer Hubi Helitaanka Magacyada
Talaabada xigta waa in la-hubiyo magaca la soo jeediyay ee la heli karo. Hubi in magaca aan horay looga isticmaalin gobolka shirkad kale oo masuuliyad xaddidan.
Xafiiska ganacsiga ee gobolkaagu waa inuu awoodaa inuu ku siiyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida loo go'aamiyo haddii magacaaga ganacsi ee la soo jeediyay uu horay u isticmaalay LLC kale.
Haddii magaca la codsaday la heli karo, gobolkaagu waxa laga yaabaa inuu kaaga baahdo inaad si ku meel gaar ah u sii hayso. Tani waxay ka ilaalin doontaa milkiile kale oo ganacsi inuu si guul leh u codsado isla magaca ka hor intaadan buuxin codsigaaga samaynta LLC.
Gobolada intooda badan, uma baahnid inaad si gooni ah u diiwaan geliso magaca loogu talagalay markaad xeraynayso qodobbada isku darka.
Waxaad ku dhejin kartaa baahidaada sharciyeed ee caawinta sida loo sameeyo LLC goobta suuqa ee UpCounsel.
Waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn inaad raacdo dhammaan hababka hoos ku xusan iyadoo ku xiran gobolka aad qorsheyneyso inaad ku sameysid LLC.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ficilada gaarka ah ee aad u baahan doonto inaad qaado si aad si sax ah u dhisto LLC waxaa laga heli karaa hoosta. Haddii aad wali wareersan tahay, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad la hadasho xafiiska ganacsiga ee gobolkaaga.
Ama raac tillaabooyinkan si aad u barato sida si fudud loogu codsado LLC 2022:
1. Go'aanso Magaca Shirkadda
Waa muhiim inaad waqti ku qaadato inaad tixgeliso magaca LLC-kaaga cusub. Waxaa jira walaacyo kale oo muhiim ah oo sharci ah marka laga reebo doorashada magac wanaagsan oo ganacsi iyo ujeeddooyin suuqgeyneed - tusaale ahaan, mid kaa caawin doona inaad koraan oo aad samaysato aqoonsiga sumadda.
Si loo bilaabo, magaca ganacsigaaga LLC waa inuu si cad u sheegaa inay tahay shirkad xaddidan. Natiijo ahaan, waxaad u baahan doontaa inaad ku darto magacaaga sida "LLC" ama "ganacsiga daynta xadidan" magacaaga.
Sidoo kale ma isticmaali kartid eray kasta oo gobolkaagu ka mamnuucay in lagu isticmaalo magaca LLC ee magacaaga. Gobolada intooda badan, tusaale ahaan, waxay mamnuucaan isticmaalka erey-bixinta sida "bangi" ama "caymiska."
Hubi liiska ereyada la mamnuucay ee gobolkaaga si aad u hubiso in magaca ganacsigaaga ee aad dooratay aanu ku jirin eray kasta oo la mamnuucay.
Sidoo kale, hubi si aad u aragto in magacaaga ganacsi ee aad soo jeedisay uu ku xad-gudbay calaamado ganacsi oo jira. Nidaamka Raadinta Elektrooniga ah ee Ganacsiga (TESS), xog ururinta calaamadaha ganacsiga ee diiwaangashan iyo codsiyada summada ganacsiga ee horay loo sugayey ee uu hayo Xafiiska Patent and Trademark Office, ayaa loo isticmaali karaa in lagu hubiyo jebinta suurtagalka ah.
In kasta oo raadinta summada-ganacsigu aanay muhiim ahayn, waa fikrad wanaagsan sababtoo ah waxaad awoodi doontaa inaad hubiso in calaamadda ganacsiga mar hore la diiwaangeliyey ama la codsatay taas oo aad ugu eg magacaaga LLC ee loogu talagalay.
2. Xaqiiji in Magaca Shirkad la heli karo
Kadib markaad go'aansatid magac ganacsi, hubi si aad u aragto in ay horay u isticmaalaysay shirkad kale oo gobolkaaga ah.
Xafiiska ganacsiga ee gobolkaagu waa inuu awoodaa inuu ku siiyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida loo ogaado haddii magacaaga ganacsi ee la soo jeediyay uu horay u isticmaalay shirkad kale.
Haddii magacaaga ganacsi ee aad soo jeedisay uu jiro, gobolkaagu waxa laga yaabaa inuu kuu oggolaado inaad si ku meel gaar ah u sii haysato ilaa aad ka heli karto waraaqahaga.
Gobolada intooda badan, waxay isla markaaba diiwaan gelin doonaan magaca ganacsigaaga marka aad xerayso maqaalladaada ka mid noqoshada, markaa uma baahnid inaad si gaar ah u samayso.
Waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in magacaaga ganacsiga, ama kala duwanaanshihiisa, uu diyaar u yahay iibsashada magac domain ahaan, marka lagu daro hubinta in LLC jira uusan horay ugu isticmaalin gobolkaaga.
Weydiimaha noocaas ah, xogta WHOIS waa kheyraad faa'iido leh. Haddii magacaaga aad dooratay sidoo kale loo heli karo magac domain ahaan, waa inaad u iibsataa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si aad uga fogaato inaad lumiso iibsadaha magac domain kale.
3. U qoondee Magaca DBA
Inta badan LLC-yadu waxay ku hoos shaqeeyaan magacyadooda ganacsi, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad iska diiwaan geliso DBA ("ka ganacsiga sida") magaca haddii aad rabto inaad ku qabato shirkaddaada magac aan ahayn magaceeda ganacsi.
Magaca DBA waa magac ka duwan LLC kaaga magaca ganacsiga ee sida rasmiga ah uga diwaangashan. Waxa kale oo loo yaqaan magac la qaatay ama magac ganacsi.
Haddii aad qorsheyneyso inaad isticmaasho magaca DBA, ka hubi saraakiisha gobolka si aad u ogaato habka.
4. U xarayso Qodobbada Ururka LLC kaaga.
Waa inaad u fayl-garaysataa maqaallada ku-daridda gobolkaaga markaad samaysanayso LLC. Inta badan gobolada waxay u tixraacaan dukumeentiga sida "maqaalada ururka," inkastoo gobolkaagu uu u yeeri karo wax kale, shahaadada samaynta.
Maqaalada ururku inta badan waa waraaqo fudud oo lagu buuxinayo oo aad ka heli karto ganacsiga gobolkaaga ama wakaalada xaraynta.
Waxa kale oo laga yaabaa in aad ka heli karto nuqul ka mid ah foomka internetka oo maran gobollo badan. Iyadoo macluumaadka lagama maarmaanka ah ay ku kala duwan yihiin gobol ahaan, waxaad inta badan u baahan doontaa inaad keento magaca LLC-gaaga iyo cinwaankaaga, iyo sidoo kale magacyada xubnaheeda.
Kadib markaad dhamaystirto maqaalladaada ururka, waxaad u baahan doontaa inaad ka fayl garayso gobolkaaga, oo ay la socoto kharashka xaraynta ee saxda ah.
Inta badan gobolada waxay kaaga baahan yihiin inaad ka diiwaan geliso maqaalladaada ururka Xoghayaha Dawladda, laakiin gobolada qaarkood ayaa laga yaabaa inay u baahdaan inaad u fayl garayso cid gaar ah.
Boggeeda internetka, Maamulka Ganacsiga Yaryar wuxuu leeyahay liis xiriiriya xafiisyada ganacsiga ee gobolka.
Ka hubi liiskan xiriirinta xafiiska ganacsiga ee gobolkaaga, halkaas oo aad wax badan ka baran karto meesha aad ka xaraynayso maqaalladaada ku darida iyo kharashka xaraynta, haddii ay jirto, ayaa loo baahan yahay.
5. Dooro Wakiil Diiwaangashan
Wakiil diiwaangashan ayaa looga baahan yahay gobolada intooda badan LLC. Wakiilka diiwaangashan, oo sidoo kale loo yaqaan server-ka habsocodka, waa qofka hela adeegga ogeysiisyada nidaamka, isgaarsiinta dowladda, iyo warqadaha la xiriira u hoggaansanaanta isagoo ku hadlaya magacaaga.
Ganacsiyada intooda badani waxay magacaabi doonaan mid ka mid ah xubnaha LLC si uu ugu adeego wakiilka diiwaangashan.
6. Samee heshiis ganacsi
In kasta oo gobolada intooda badan aysan u baahnayn heshiiska hawlgalka LLC, mid lahaanshaha wali waa go'aan caqli gal ah.
Heshiis hawleedku waa heshiis muhiim ah oo dejiya qaab-dhismeedka go'aannada ganacsiga gudaha ee muhiimka ah.
Boqolkiiba xubnaha lahaanshaha, xuquuqda cod bixinta iyo waajibaadka, awoodaha iyo waajibaadka xubnaha, iyo qodobbada xakameynaya wareejinta danaha xubnaha ayaa ah mawduucyada caadiga ah ee lagu sheegay heshiisyada hawlgalka.
Waxa kale oo mudan in la xuso taas, halka gobolada intooda badani aanay u baahnayn LLC-yada si ay u yeeshaan heshiisyo hawleed, qaar ayaa sameeya. Haddii ay u baahan yihiin heshiis hawlgelineed gobolkaaga, ka hubi iyaga.
7. Buuxi Shuruudaha Daabacaada
Waxaa laga yaabaa in lagugu qasbo inaad ku soo saarto ogeysiis wargeyska deegaankaaga oo ku dhawaaqaya abuurista LLC-kaaga gobolada qaarkood.
Ka hubi xafiiska xaraynta ganacsiga ee gobolkaaga wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qoraalka ogaysiiska, inta jeer ee ay tahay in la daabaco, iyo shuruudo kasta oo kale oo laga yaabo in lagu dabaqo haddii gobolkaagu leeyahay shuruudo noocaas ah.
8. Helitaanka Ruqsadaha iyo Ruqsadaha Ganacsigaaga
Kadib markaad diiwaan geliso LLC-gaaga, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso rukhsadaha ganacsiga iyo shatiga si aad u qabato shirkadaada.
Noocyada rukhsadaha ama shatiga aad u baahan doonto waxaa go'aamin doona labada sharci ee gobolka iyo dawlada hoose, iyo sidoo kale warshadaha uu ku shaqeeyo ganacsigaagu.
Waxaad ka heli kartaa liiska xafiisyada shatiga ganacsiga ee gobolka mareegaha Maamulka Ganacsiga Yaryar.
9. U fur Koonto Bangi Shirkaddaada Masuuliyadda Xaddidan
Aad bay muhiim u tahay in LLC-gaagu uu haysto akoonkiisa bangi si uu lacagta shirkaddaada uga dhigo mid ka soocan lacagaha gaarka ah ee xubnaheeda.
Abuurista akoon bangi LLC, machadyo kala duwan waxay yeelan doonaan shuruudo dukumeenti oo kala duwan. Ka hubi bangigaaga si aad u ogaato dukumeentiyada aad u baahan tahay si aad akoon ugu furto ganacsigaaga.
Miyaan u baahanahay wakiil ka diiwaangashan LLC-gayga?
Haddii aad aasaaseyso LLC ama shirkad, waa inaad haysataa wakiil diiwaangashan iyo xafiis diiwaangashan, iyadoon loo eegin meesha aad ka bilowdo shirkaddaada.
Miyaan u baahanahay qareen si aan u sameeyo LLC?
Si loogu daro LLC, ma jirto waajibaad sharci ah oo lagu hawlgelinayo qareen. Inta badan gobolada waxay kuu ogolaadaan inaad ku darto LLC adiga oo ka diiwaan galinaya xoghayaha gobolka website-ka iyo sidoo kale Adeegga Dakhliga Gudaha (IRS). Waxaad iibsan kartaa ama kiraysan kartaa xarun oo waxaad furan kartaa xisaab bangi oo adag ka dib samaynta LLC.
Miyaan helaa LLC ka hor intaanan ganacsi bilaabin?
In kasta oo LLC aan looga baahnayn inuu bilaabo ganacsi, faa'iidooyinka lahaanshada mid aad ayey uga badan tahay kharashka iyo dhibka samaynta mid. Sameynta shirkad ama nooc kale oo ganacsi ayaa sidoo kale kaa caawin kara inaad gaarto waxyaabahaas. Sidoo kale gabi ahaanba waa sharci in la bilaabo shirkad iyada oo aan la helin qaab dhismeed rasmi ah.
Immisa ayay ku kacaysaa samaynta LLC?
Kharashka lagu xareeyo maqaallada samaynta LLC-ga Xoghayaha Dawladda waa qaybta ugu qaalisan ee lagu daro LLC. Iyada oo ku xidhan gobolka, kharashkani wuxuu u dhexeeyaa $40 ilaa $500. Kharashyada kale ee la xidhiidha samaynta LLC waxaa ka mid ah shatiga ganacsiga iyo khidmadaha ogolaanshaha.
Intee in le'eg ayay qaadataa in LLC uu sameeyo?
Wakhtiga ka shaqaynta LLC runtii waxay ku xidhan tahay gobolka aad ku samaysatay LLC-gaaga. Si kastaba ha ahaatee, inta badan waxay qaadataa gobolada 7-10 maalmo shaqo; Gobolada kale waxay qaadan karaan 4-6 toddobaad, tusaale ahaan, Arizona waxay qaadanaysaa qiyaastii 22-27 maalmood oo shaqo si ay uga baaraandegto dukumentiyadaada.
Ha u qaadan in sababta oo ah aad samaynayso shirkad xaddidan ay la macno tahay in ay ka fududaan doonto socodsiinta ganacsi kasta oo kale.
Waxaa jira dhowr waxyaalood oo ay tahay inaad maskaxda ku hayso. Maalgashadayaal badan ayaa door bida inay la shaqeeyaan shirkad halkii ay ka ahaan lahaayeen LLC markay raadinayaan dhaqaale.
Sidoo kale, sababtoo ah xeerarka maamula LLC way ka duwan yihiin gobol ilaa gobol, hubi inaad sare u qaadayso shuruudaha gobol kasta oo aad ganacsi ka samayso.
legalzoom.com - Sida loo helo LLC
howtostartanllc.com – MIYAAN BILAABAA LLC?
Source Image: deposits.com
50 -ka Ganacsi Ee Ugu Wanaagsan Maalgashiga 2022 | Liis buuxa
Bilaabida ganacsigu waa rajo xiiso leh. Fikrado badan, si kastaba ha ahaatee, waxay u baahan yihiin waqti, lacag, iyo khatar. Laga bilaabo…
20 Maareeyayaasha Sanduuqa Hedge ee Lacag-bixinta ugu Fiican Sanadka 2021-ka
Sanduuqa hedge waa sanduuq maalgashi oo la isku daray oo ka ganacsata hanti dareere ah oo awood u leh in si ballaaran loo isticmaalo…
Bilaabidda Ganacsi Kulliyadda Kadib | 10 Qalad oo laga fogaan karo in la fiiriyo 2021 -ka